FREE TIMES: August 2013
zip 170 recover
zip , rar ဖိုင်တွေကို password ပေးထားပြီး မေ့နေတာဖြစ်ဖြစ် သူများပေးထားတာကို ဒေါင်းလိုက်လို့password protect လုပ်ထားတာဖြစ်ဖြစ် recovery (လူကြားကောင်းအောင်ပြောတာ :D ) crack ဖို့ကောင်းပါ၏ လိုချင်သူများ အောက်တွင် ယူသွားကြပါကုန် ဘာ ads မှ ဘာကြော်ငြာမှမခံထားပါဘူးဗျာ :D only sharing not business and economic ပါ :D အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါဗျ
ချခင်းသူ Unknown at 8:12 PM No comments :
ချခင်းသူ Unknown at 8:47 AM No comments :
ဒီ tool လေး ကွန်ပျူတာ သမားတိုင်းရှိထားသင့်ပါတယ် (လို့ တော့ ကျနော်ထင်ပါတယ် ) ဘာတွေ လုပ်နိုင်သလဲ အများကြီးပါ
junk file repair & fix
ပြီးတော့ လိုချင်တာတွေ ဒေါင်းဖို့ အတွက် application store ပါပါတယ်
application store မှာလဲ ကိုယ်ကြိုက်ရာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
အောက်မှာတော့ တစ်ခုခုရေးပေးသွားဦးနော် ကျေးဇူးပါဆိုတာကို လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး အဆင်ပြေလားမပြေလားသိချင်လို့ ပါ
sharing လုပ်ဖို့ အတွက် blog ရေးနေမှတော့ ကျေးဇူးဆိုတာက မလိုတော့ပါဘူး ကျွန်တော့်အတွက်က
လိုင်းမကောင်းလို့ဒေါင်းလင့်ကို မူရင်းဘလော့လင့်ကိုပဲညွှန်လိုက်ပါတယ် ကျွန်တော် upload လုပ်ဖို့ အတွက် အဆင်မပြေလို့ ပါ
မောင်(စွယ်စုံကျမ်) ကို credit ပေးပါသှ်
ညာဖက် အပေါ်နားလေးမှာ ၅စက္ကန့် စောင့်ပြီးရင် skip ad ဆိုတာကိုကလစ်ပေးလိုက်ရင် ဒေါင်းလင့်ကိုရောက်ပါပြီဗျ
ချခင်းသူ Unknown at 9:15 PM No comments :
ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့လက်ဆောင်ဆိုပေးမဲ့ သူတို့ တွေးရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့ လက်ခံတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီ...
ပွေ.ဖက်တာ၊အနမ်းကလေးတွေ၊ကျောပြင်လေးကို ပုတ်ပေးတာ၊လက်ကလေးကိုင်တာ၊အဲဒီ အပြုအမူကလေးတွေက ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကိုယ့်အချစ်ကို ဖော်ပြပေးရာတာမို့ ရက်ရောစွာပေးပါတဲ့
ရိုးရိုးကလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်......."ကူညီပေးတဲ့အတွက် ကျေူဇူးပါ"ဆိုတာမျိုးလေ၊ဒါမှမဟုတ် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်.....၊ကိုယ့်လက်ရေးနဲ.ရေးထားတဲ့ စာတိုကလေးတစ်စောင်ဖြစ်ဖြစ် ဘ၀တစ်သက်စာ အမှတ်တရ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်၊ ဘ၀ကိုတောင် ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်တဲ့
ဥပမာ...."အနီရောင်လေးနဲ့ လိုက်တယ်နော်" "မင်းအကောင်းဆုံး လုပ်ခဲ့တာပဲနော်"ဆိုတဲ့စကားလေးတွေက လူတစ်ယောက်အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ နေ.တစ်နေ.ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့
ဆုံးနည်းလမ်းက တစ်ယောက်ယောက်ကို နူးညံ့ချိုသာတဲ့ စကားတစ်ခွန်းလောက် ပြောပေးပါတဲ့ ဥပမာ......."ကျေးဇူးပါ" "သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာပါ"ဆိုတာလေးတွေပေါ့
ချခင်းသူ Unknown at 1:07 AM No comments :
လူတယောက်အနေနဲ့ ခနွာကိုယ်တခုရလာရင် မျက်ရည်တွေ အပြုံးတွေ အမုန်းတွေ အချစ်တွေအလွမ်းတွေ ရလာကြတယ်...။
လူတယောက်အနေနဲ့ခနွာကိုယ် တခုရလာရင်လောဘတွေ(အလိုရမက်) ဒေါသတွေ(သည်းခံနိုင်ခြင်းမ၇ှိ) မောဟတွေ
(အမှားအမှန်ခွဲခြားမူမရှိ) ဖြစ်လာကြတယ် လူရယ်ဖြစ်လာရင် တွေးတောဆင်ခြင်မူတွေ ဝေဖန်ထောက်ဆမူတွေရှိသင့်တယ်
ဒါကြောင့်အသက်နဲ့ခနွာကိုယ်တည်သရွေ့ အောက်မကျ နောက်မကျ ပဲမျော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ကိုတူးဖေါ်နေရမယ်။
"အနိုင်ယူဖို့ပါ" အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်နေသရွေ့ မျော်လင့်ချက်ရှိနေရမယ် ... ဘ၀ဆိုတာ အရှုံးပေးဖို့ မဟုတ်ဘူး အနိုင်ယူဖို့ပါ။..........။
"သိက္ခာကျတယ်" မရှိရင်တောင်းစားပါ ခိုးမစားပါနဲ့ ... တောင်းစားတာက သိက္ခာမကျဘူး ခိုးစားတာက သိက္ခာကျတယ်.............။
"စဉ်းစားပါ" သူတစ်ပါးတွေက ကိုယ်အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမျှော်မနေပါနဲ့ ... ကိုယ်ကသာသူများတွေအတွက်------
ဘာလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသာ စဉ်းစားထားပါ ....
ရှိပါစေ'သဘာဝကပေးလာတဲ့ အကောင်းအဆိုးလက်ဆောင်တွေကို------မမှိတ်မသုန် လက်ခံနိုင်တဲ့ နှလုံးသားရှိပါစေ ....
"ကောင်းအောင်နေ သညာခေတ်ကြီးလား တဏှာခေတ်ကြီးလား .?ဘာခေတ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်
"ရပ်တည်ပါ" လူယုတ်မာတွေများတဲ့ လောကမှာလူကောင်း---တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ပါ ...သူတစ်ပါးသားမယားစော်ကားမှ လူယုတ်မာ မဟုတ်ဘူး. ကျေးဇူးတရားကို မသိတတ်သူကျေးဇူးကန်းသူတွေဟာလည်း လူယုတ်မာပဲ ။
"ငြိမ်းချမ်းသူ" မေတ္တာဆိုတာ ယူသွားတဲ့လူတော့မသိဘူး ပေးနေတဲ့ လူကတော့အင်မတန်ကိုငြိမ်းချမ်းတယ် ...
"ပညာမဲ့သူ" လောကမှာ ပညာမဲ့သူတွေဟာ အင်မတန် အငြင်းအခုန် သန်ကြတယ် ... တယူသန် .တဇွတ် ထိုးငြင်းခုန်နေတဲ့ သူဆိုရင် ပညာမဲ့သူလို့လွယ်လင့်တကူ သိနိုင်တယ်..။
. "ရှာဖွေပါ" စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မူနဲ့ ငြိမ်းချမ်း.......သာယာမူဆိုတာ ငွေနဲ့ဝယ်ယူလို့မရပါဘူး မွန်မြတ်တဲ့အသိပညာတွေနဲ့ပဲ ရှာဖွေယူရတာပါ ....။
(လိုအပ်ချက်) လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်လို့ ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်းတဆိတ်လောက် မေးကြည့်ပါ လိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ရှိနေတယ်လိုချင်တောင်းတမူ တွေရှိနေသေးသရွေ့ လိုအပ်ချက်ဆိုတာရှိနေအုံးမှာပါ ..။
(ပညာမဲ့နဲ့ပညာရှိ) ပညာမဲ့တဲ့ သူတွေဟာ အချိန်ပြည့်ရုပ်လှဖို့ပဲကြိုးစားနေကြတယ် ပညာအသင့်တင့်ရှိတဲ့သူက တော့
စိတ်လှဖို့ပဲ အချိန်ပြည့်ကြိုးစားတယ် ပညာအရှိဆုံးလူကတော့စိတ်ရော ရုပ်ရောဖြစ်တည်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို အဆုံးသတ်ပစ်ဖို့ပဲ အချိန်ပြည့် ကြိုးစားနေတော့တယ် ..................။
(မေတ္တာတရား)သူတစ်ပါးအကျိုးကိုအလိုမရှိရင် ကိုယ့်ဘ၀အတွက်လည်း မွန်မြတ်တဲ့ကောင်းကျိုး ချမ်းသာမူတွေ
ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် ...တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး အကျိုးလိုလားတဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံပါ။
(ကျေးဇူးတင်ပါ) အပေါ်ကိုမြောက်မတက်သွားအောင်ဆွဲထားပေးတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကိုကျေးဇူးတင်ပါ " ကျေးဇူးသိတတ်မှသာ အောက်ခြေမလွတ်မှာလေ။
(များခဲ့ပြီ) သဘာဝတရားရဲ့မပြည်စုံတဲ့ ရုပ်ပြ တစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်နေခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တွေက များခဲ့ပြီ"လေ။
(ဖြတ်သန်းလိုက်) ဘ၀ဆိုတာ မျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေထက်မမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေက ပိုပြီးဖြစ်လာ
တတ်ပါတယ် .. သဘာဝကျကျဖြတ်သန်းလိုက်ပါ...
(သိအောင်လုပ်) ဘ၀က အဥာဏ(ညာဏ်မရှိသူ)တွေများလေလေဆင်းရဲလေလေပဲ .. ချမ်းသာချင်လား...သိအောင်လုပ်ပါ.. သဘာဝအရှိကိုအရှိအတိ်ုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့ အမှန်တရားကို အမှန်တိုင်းသိမြင်နိုင်ဖို့ပါ
(ရိုးသားမူနဲ့စတိုင်ထုတ်ပါ တန်ဖိုးကြီးတဲ့အကောင်းစား အ၀တ်တွေ ဖိနပ်တွေ ၀ယ်စီးနိုင်မှ ဂုဏ်မြင့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး.
.သင့်တင့်တဲ့ အ၀တ်အစားနဲ့ပဲ ရိုးရိုးသားသားနေတတ်မယ်ဆိုရင် ဂုဏ်ကမြင့်နေပါပြီ....(ဆက်ရန်...........။)
ကော်မန့်မရေးလို ၀မ်းမနည်းပါဘူး မှတ်သားသွားတယ်ဆိုရင်...ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီး
ချခင်းသူ Unknown at 9:51 PM No comments :